सबै प्रकारका गरी कूल रु एक खर्ब ३४ अर्बको खाद्य वस्तु आयात |Websoft IT Nepal Pvt. Ltd.| Radio Nagarik 100.4 Mhz Halloween Costume ideas 2015
Radio Nagarik 100.4 Mhz
[2column][content] [/content] [content] [/content][/2column]
एमाले ले गर्ने आमसभा को पूर्वसन्ध्यामा मधेशवादी द्धारा एमाले विदाई कार्यक्रम
हरिनगरा, २४ पुस । नेकपा एमालेले सुनसरीको दक्षिणी गाविस हरिनगरामा भोली गर्ने आमसभा र शक्ति प्रर्दशनलाई लक्षित गरी मधेशी दल आवद्ध स्थानीयहर...
हरिनगरामा आज कडा सुरक्षा बिच एमाले ले गरे आम सभा
हरिनगरा, २५ पुस । नेकपा एमाले सुनसरीको दक्षिणी गाविस हरिनगरामा आज कडा सुरक्षा बिच आमसभा भएको छ । आम सभा र शक्ति प्रर्दशनलाई लक्षित गरी ...
देवानगञ्ज गाँउपालिकाको बजेट सार्वजनिक
विराटनगर, असोज ८ सुनसरी स्थीत देवानगञ्ज गाउँपालिकाले बजेट निति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सो गाउँपालिकाको परिषदले पारित गरेको ...
फेरियो जिम्मेवारी मेहता यातायात राज्यमंत्रीमा
विराटनगर मंसिर १४ । सुनसरी क्षेत्र नम्वर ४ का सांसद सीताराम मेहतालाई यातायात राज्य मंत्रीको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।काँग्रेसले पेश गरेको ...
वन राज्य मंत्रीको जिम्मेवारीमा सिताराम मेहता
विराटनगर मंसिर १४ । सुनसरी क्षेत्र नम्वर ४ का सांसद सीताराम मेहताले वन राज्य मंत्रीको जिम्मेवारी पाउने भएका छन् । नेपाली काँग्रेसले सिफा...
चर्चित गायक प्रकाश ओझा जेल चलान
विराटनगर, १४ माघ । चर्चित गायक प्रकाश ओझा जेल चलान भएका छन् । ओझालाई प्रहरीले गीत रेकर्डिङका लागि काठमाडौं आएका बेला शंखमुलबाट पक्राउ...
विवाहका लागि न्यूनतम उमेर २० वर्ष हुनुपर्ने
काठमाडौँ, २ ८ माघ । संसद्को विधायन समितिले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकमध्ये देवानीसंहिता पारित गरेको छ। ‘मुलुकी देवानी संहिता २०७३...
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा २५० भन्दा बढी पदमा खुला दरखास्त आह्वान
विराटनगर , २ ७ पुस । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एकैपटक २५० भन्दा बढी पदमा खुला दरखास्त आह्वान गरेको छ । बुधबार एक विज्ञापन प्रकाशित...
एक पुजारीकोे आज विष खाएर मृत्यु
सप्तरी, २ माघ । कोलाडी बसाइनस्थित रामजानकी मन्दिरमा पूजा गर्ने एक पुजारीकोे आज विष खाएर मृत्यु भएको छ । सत्तरीवर्षीय मन्दिरका पुजारी फुलो...
लोकसेवा आयोग द्धारा नासुका लागि दरखास्त खुलेको छ
विराटनगर , २ ७ पुस । लोकसेवा आयोगले निजामती सेवाका विभिन्न समूहमा १ हजार १ सय १२ जना नायब सुब्बाका लागि दरखास्त माग गरेको छ । जसमध्य...
सबै प्रकारका गरी कूल रु एक खर्ब ३४ अर्बको खाद्य वस्तु आयात
काठमाडौँ, ३० असोज । सरकारले खाद्यवस्तु उत्पादनमा जोड दिँदै आएपनि यसको आयात भने बढ्दो छ । यसवर्ष मात्र सबै प्रकारका गरी कूल रु एक खर्ब ३४ अर्बको खाद्य वस्तु आयात भएको छ ।
खाद्यान्नमा गहुँ र कुखुराको मासुबाहेक नेपालीलाई आफ्नो उत्पादनले धान्दैन । खानेबानीमा सुधार नहुँदा पनि चामालको आयातदर वृद्धि हुँदै आएको छ भने गहुँको खपत दर न्यून छ । नेपालमा यसवर्ष १७ लाख मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको छ भने रु २५ अर्बको चामल आयात भएको छ ।
आज अक्टोबर १६ का दिन विश्वभर खाद्य दिवस मनाइन्छ, नेपालमा भने परिणाम खोज्ने भन्दा औपचारिक भाषणमा मात्रै यो दिवस मनाइएको छ । ‘जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, खाद्य र कृषि फेरिनैपर्छ । ’ ३६ औँ विश्व खाद्य दिवसको नारा हो यो । नारामा गोलवद्ध भएका वक्ताले खाद्य अधिकार र कर्तब्यका बारेमा सिंहदरबार भित्र र बाहिर आ–आफ्ना अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरे ।
सिंहदरबार बाहिर खाद्यका लागि कृषिका अभियानका संयोजक डा कृष्ण पौडेलले संविधानमा उल्लेखित खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभूतालाई कार्यान्वयन गर्न सबै समूह र व्यक्ति प्रतिवद्ध हुनुपर्ने धारण व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालका अधिकांश भागमा खानै नपाएर कोही व्यक्ति मरेको औपचारिक तथ्याङ्क अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन तर कर्णली अञ्चलका केही जिल्लामा भोकमरी बढेको भन्ने समाचार सम्प्रेषण हुने क्रम जारी छ ।
सो क्षेत्रमा पाइने स्थानीय उवा, कोदो, जौँ, कागुनो, जुनेलोजस्ता अतिपौष्टिक खाद्यन्न विस्थापित भएका छन् । त्यहाँका मानिसको खानेबानीमा समेत परिवर्तन आएको छ । स्थानीयस्तरमा पाइने अन्नको सट्टा खरिद गरेको चामलमा परनिर्भर भएका कारण स्थानीय खाद्यन्न अभाव भएको हो ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी खाद्यान्नउत्पादनमा भन्दा खरिदमा सरकारी निकाय सक्रिय भएको आरोप लगाउनुहुन्छ ।
नेपाल कृषि पत्रकार प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष किरण आचार्य खेती गर्नेभन्दा नगर्नेले भरपेट खान पाउँछन् तर दैनिक खेतबारीमा काम गर्ने महिला, आदिवासी, दलित जनजाति, सुकुम्वासी र सीमान्तकृत तथा पिछडिएको वर्गले भरपेट खान पाउदैनन् भन्नुहुन्छ । अहिले पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली चरम गरिबीमा जीवन बिताउन बाध्य छन् भने ४० प्रतिशत भन्दामाथि कुपोषणको सिकार छन् । तर नेपालले खाद्य सुरक्षा र पोषणका लागि दिगो खाद्य प्रणाली स्थापित गर्न सकेको छैन ।
सेप्टेम्बर २०१५ मा सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय दिगो विकास सम्मेलनमा १९३ राष्ट्रले आगामी १५ वर्षभित्र भोकमरी अन्त गर्ने जनाएका थिए । त्यसको दुई महिनापछि फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भेला भएका १९५ देशका प्रतिनिधिले खाद्य सुरक्षा नै अहिलेको मुख्य प्राथमिकता रहेको तर जलवायु मुख्य चुनौती रहेको धारण सार्वजनिक गरेका थिए ।
नेपालमा भने जलवायु परिवर्तन भन्दा पनि जग्गाको खण्डीकरण र खेतीपाती नगर्ने अर्थात बाझै राख्ने चलनले खाद्य सङ्कट निम्तीनसक्ने विज्ञवर्गले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कृषि गणना २०६८ लाई आधार मान्दा विगत एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाझै छ । जस्मा ३० लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा खेती भएको छ ।
सो अवधिमा धान ९ प्रतिशत, गहुँ ६, मकै १२ कोदो १९, जौ ३५, फापर ४०, कोसेबाली २१, तोरीबालीमा १३ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ । छैठाँैं कृषि गणनाले एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेसा अपनाउन नपाएको र कृषिबाटै रोजगार गर्न चहानेको लागि राज्यले सहज लगानीको वातावरण मिलाउन नसकेको समेत सो गणनामा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, हुनेखाने कुलिन वर्ग सहर केन्द्रित हुने र युवावर्ग वैदेशिक रोजगारमा गएका कारण जग्गा बाझिने क्रम बढेको हो । बयालिस प्रतिशत कृषकले व्यवसायीक कृषिका लागि ऋण उपलब्ध नभएको कृषि गणना २०६८मा उल्लेख छ ।
उर्वरजमिनलाई बाझो राख्न नपाइने कानुनको अभाव, सीमित व्यक्तिबाट प्रचुर जमिन अतिक्रमण, जग्गको खण्डीकरण, खेतीयोग्य भूमि घडेरीमा परिवर्तन , परम्परागत आकासे खेतीमा परनिर्भरता, सिँचाइको अभाव, उन्नत जातका बिउविजन तथा मलखाद तथा कृषि अनुदानको अभाव, सरकारी उदासिनता, उत्पादको उचित मूल्य नपाउनु र शिक्षित वर्गबाटै कृषि पेसालाई उपहास गर्ने कारणले नेपालमा खाद्य सङ्कट बढ्दै आएको हो ।
रेडियो कार्यक्रमको एक झलक प्रसारणको समयस् विहान ५:०० बजे देखि रात्री ११:०० बजेसम्म । दैनिक १८ घण्टा । प्रत्येक दिन हिन्दू, वौद्ध, इस्लाम तथा अन्य धार्मिक भजन–प्रवचन एवं सन्देश मुलक कार्यक्रम प्रसारण हुने गर्दछ । मनोरंजनको कार्यक्रममा अहिले नेपाली, हिन्दी, मैथिली, थारु,भोजपुरी,राजवशी अन्य भाषामा लोकप्रिय गीतका विविध कार्यक्रमहरू दैनिक रुपमा प्रसारित भैरहेको छ ।
Address: Biratnagar Morang Nepal
Phone: 021-522704, 525183
Radio Nagarik 100.4 Mhz © 2016. All Rights Reserved.
Introduction to XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX